အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်း-မောင်မောင်ဇော် လ တ် ၊ အ ယ် လ် ဖြူ၊ တာရာ#212762 | Featuring
Home › အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်း›မောင်မောင်ဇော် လ တ် ၊ အ ယ် လ် ဖြူ၊ တာရာ
အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်း-မောင်မောင်ဇော် လ တ် ၊ အ ယ် လ် ဖြူ၊ တာရာ
by Ko Kyaw OoDuration: 04:25
Downloading အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်း-မောင်မောင်ဇော် လ တ် ၊ အ ယ် လ် ဖြူ၊ တာရာmp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.
အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်း-မောင်မောင်ဇော် လ တ် ၊ အ ယ် လ် ဖြူ၊ တာရာအ မြဲ တ မ်းရဲ့ ဆုံးဖြ တ် ချ က် နဲ့ကျောခို င်းလှ ည့် ထွ က် ပြီးအ သွား မှာရှိ ခဲ့ တဲ့ ချ စ် သံယောဇ ဉ်လေးေ တွ ကို ယ် မြ င်ယောင် တ မ်းတလျှောက် ခဲ့ တဲ့ လ မ်းကလေးထ က် က တို့ ရဲ့အ ရိ ပ်တွေ ပျ ယ် လွှ င့် ရ င်းအ မှ တ် တ ရ နဲ့ရေးမှ တ် ခဲ့ တဲ့ ပို့ စ က ဒ် အ လွ မ်းေ တွကြေ မွ ရ င်းတ ရှို က် မ က် မ က် န မ်းခဲ့ ဖူးတဲ့ မ င်းဆံ ညိုတွေ အိ ပ် မ က် များ လား အ လ င်းမဲ့ တဲ့ အ ခ န်းကျ ဉ်းထဲ က ဝိုးတ ဝါးေ တးက ဗျာအ ပို င်းအ စတွေ တို့ ရဲ့ဘ ဝ ထမြောက် ဖို့ အ တွ က် မ င်းေ ခြ သံတွေမျှော် လ င့် ထား ရ င်းအ ငြိုးတ ကြီးနဲ့ရေးဆွဲ ခဲ့ တဲ့ မ င်းရဲ့အ မု န်းပ န်းချီ ပုံ ရိ ပ် များ အ တို င်းအ ဆ မဲ့ ခါးသီးခြ င်းနဲ့ စူးန စ် ကွဲကြေ ဒါ ဏ် ရာများနေ့ နဲ့ ည လွဲ မှား ခဲ့ ရ ရ က် စ က် ခြ င်းမှာအ ကြိ မ် ကြိ မ် ရှုံးနိ မ့် ရ င်းဒီ လို အ သ က် မဲ့နေ့ ရ က် များ ရဲ့ ကို ယ့် အ တွ က် အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်းများ မာန များ လဲ တ စ် စ စီ ကွဲ ရှ ကို ယ့် ရဲ့ အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်းများ ကြ င် နာသူ ရ ယ် ရ င် ခု န် ခြ င်းနဲ့ ငို ရှို က် ရ င်းနဲ့ လွ မ်းမ ဆုံးဘူးလား
Watch video on Youtube: အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်း-မောင်မောင်ဇော် လ တ် ၊ အ ယ် လ် ဖြူ၊ တာရာ
Search another results: အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်း-မောင်မောင်ဇော် လ တ် ၊ အ ယ် လ် ဖြူ၊ တာရာ
Post related to အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်း-မောင်မောင်ဇော် လ တ် ၊ အ ယ် လ် ဖြူ၊ တာရာ:
[04:58] မျက်စိမှိတ်ထားတယ် -ထူးအိမ်သင်၊ တာရာBy Ko Kyaw Ooမျက်စိမှိတ်ထားတယ် - မောင်� ...
[04:13] ဘ ဝ - အ ယ် လ် ဖြူ ၊ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်By Ko Kyaw Ooဘ ဝ - အ ယ် လ် ဖြူ ၊ဇော် ဝ င် � ...
[04:36] အ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်း-မောင်မောင်ဇော် လ တ် ၊ အ ယ် လ် ဖြူ ၊ အ ယ် လ်နောင်းBy Ko Kyaw Ooအ သ ည်းကွဲ ညနေ ခ င်း-မော...
[03:50] Maung Maung Zaw Lat မောင်မောင်ဇော်လတ်-Yone Ba-ယုံပါBy ngam bawmyone ba- maung maung zaw lat
[03:48] ငိုနေ မ ယ် မိုးသ ည်းထဲ မှာBy Ko Kyaw OoCRYING IN THE RAIN - Don Williams